Farsamadan cusub ee ku dhacda Macs waxaa loo yaqaan Eleanor | Wararka IPhone
Farsamadan cusub ee ku dhacda Macs waxaa loo yaqaan Eleanor
Had iyo jeer waxaa la sheegaa in Macs ay ka badbaado badan yihiin, oo aysan u baahnayn wax codsi ah si looga fogaado fayrasyada, in haddii ay ka ammaan roon yihiin ... aysan jirin wax runta ka sii fog. Windows-ka waligiis wuxuu ahaa midka ugu rakibsan uguna adeegsiga badan nidaamka adduunka halka OS X aysan si dhib yar u adeegsanin dadka laga tirada badan yahay, sidaa awgeed Hackers-ku waxay had iyo jeer diiradda saaraan dadaalkooda sidii ay u kala hormarin lahaayeen weeraradooda ku saabsan Windows-ka oo aysan ku saarin OS X.
Laakiin xoogaa hadda, waxay umuuqataa in Macs ay bartilmaameedsanayaan qof kale saaxiibadiisa, iyo dhowrkii biloodba mar khayaano cusub, virus ama Trojan ayaa u muuqda inay weerarayaan Macs. Way cadahay in adeegsadayaal aad iyo aad u tiro badani ay isticmaalayaan kombiyuutaradaas iyo kuwa wax jabsada ee doonaya inay ballaariyaan hawshooda ficil iyagoo waliba weeraraya adeegsadayaashan.
Bitdefender waxay ogaatay furin cusub oo saameyn ku yeelata inta badan Macs nidaamka OS X, iyo in lagu baabtiisay magaca Backdoor.MAC.Elanor. Sida kaliya ee lagu tago kombuyuutarradeena ayaa ah iyada oo loo marayo codsiyada aan soo marin shaandhada Mac App Store, taas oo ah, iyagu ma aysan xaqiijin shirkadda.
Codsiga la daryeelayo ku faafi khayaanadan waa EasyDoc Converter, codsi aragti ahaan noo oggolaanaya inaan u beddelo feylasha qaabab kala duwan, beddelaad aan waligeed la fulin, laakiin markii aad rakibto, waxaad horay u qaadsiisay cudurka. Codsigan, sida kuwa kale oo badan oo ballanqaadaya waxyaabo badan oo aan waxba la qaban, ayaa loo heli karaa in laga soo dejiyo bogagyo kala duwan, taas oo sababtay ballaarin deg deg ah iyo is-qaadsiinta malaayiin badan oo Macs ah.
Furinkani wuxuu bixiyaa wadarta xakamaynta nidaamka, habkaas oo ay ka horjoogsan karto gelitaanka, tu badal Mac-keena botnet-ka si loo fuliyo weerarada DDoS iyo in la abuuro shabakad kumbuyuutaro zombie ah oo lagu xakamayn karo iyadoo loo eegayo isticmaalka ay jabsadayaashu doonayaan inay siiyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Farsamadan cusub ee ku dhacda Macs waxaa loo yaqaan Eleanor
Fayraska ku dhaca dhammaan aaladaha macruufka ayaa leefleefay: ios 7,8,9 iyo 10 kan dambe ayaa ka mid ah kuwa ugu halista badan!
Sida loo furo Mac-da Apple Watch
Apple wuxuu sii daayaa tvOS 9.2.2 beta 5 iyo OS X 10.11.6 beta 5